ᐈ # 10 Zava-misy mahatalanjona momba ny Andean Condor - Arzantina
Tsy manana serivisy sela aho
ny fomba fanamboarana charger iphone
ny fomba fampifandraisana iphone amin'ny Bluetooth fiara
Ny zava-misy momba ny condor andean
ny Andean Condor (Vorona Gryphus) dia a Vorona amerikana atsimo an'ny an'ny Fianakaviam-borona World New Cathartidae , ary izy irery no mpikambana velona amin'ny karazana Vultur. Na dia mihena aza ny isa ao amin'ny firenena, ny Andean Condor no tena biby nasionalin'i Kolombia.
Na eo aza ny habeny goavambe, ny volony mahavariana ary ny toetrany mahaliana, tsy dia maro ny olona mahalala an'io vorona tsara tarehy io. Raha iray amin'ireo olona ireo ianao dia aza manahy, dia ho manam-pahaizana Andean Condor ianao rehefa avy namaky ny zava-misy tsy mahazatra eto ambany.
1. Raptor lehibe indrindra eto an-tany
Ny Andean Condor mampiseho ny elany malalaka. Sary: Shutterstock.
Miaraka amin'ny sakan'ny elatra mihoatra ny 3 metatra (10 metatra), ny Andean Condor dia heverina ho manidina lehibe indrindra vorona eto amin'izao tontolo izao. Ny olon-dehibe efa lehibe dia afaka mahatratra 15 kg (33 kilao) ary mahatratra 1,2 metatra ny halavany. Ity zavaboary mahatalanjona ity no Raptor lehibe indrindra manerantany.
2. Tsy ny sidina tsara indrindra ve
Ny Andean Condor Flying. Sary: Shutterstock.
Na dia manana elatra mahavariana aza izy ireo, indraindray ny Andean Condors dia manana fotoana sarotra hijanonana ambony rehefa manidina, noho ny lanjany lehibe. Izany no antony itiavan'ny vorona ity faritra be rivotra, izay ahafahany mitsoraka moramora amin'ny onjan-drivotra. Andean Condors, miaraka amin'ny fanampian'ny natiora, dia afaka miakatra hatrany amin'ny 5 500 metatra!
3. Manaova fijery tena miavaka
Condor lahy Andean. Sary: Shutterstock.
Andean Condors dia tena manjelanjelatra mijery, misy volom-borona mainty manarona manarona ny vatany, ary misy volom-borona manidina fotsy miavaka izay maninjitra toy ny rantsantanana rehefa eny amin'ny rivotra. Ny lahy sy ny vavy samy manana ny loha sola, kanefa, ny lahy lehibe kokoa noho ny vehivavy, manana maso mavo ary manao ruffe fotsy mahasarika maso eo am-pototry ny vozony. Ny vehivavy kosa, tsy manana ruffle ary mena maso.
4. Mipetraha amin'ny toerana mahavariana
Andean Condor Manidina eo amin'ny efitr'i Atacama. Sary: Shutterstock.
Mifanohitra amin'ny anarany, ny Andean Condors dia tsy mipetraka fotsiny amin'ny faritra Andean Mountain any Amerika Atsimo. Ireo vorona ireo dia azo jerena ihany koa any amin'ny faritra amoron-tsiraka, mankafy ny fitsokan'ny rivotra, ary na dia ny faritra efitra aza, izay manararaotra ny onjan-driaka mafana. Ny isan'ny Andean Condor no be indrindra any Arzantina sy atsimon'i Chile, na izany aza ny isan'izy ireo dia milatsaka any Kolombia, Ekoatera ary Venezoela, ka vao mainka tsy fahita firy ny fahitana ilay vorona amin'ireo faritra ireo.
5. Manana teknikan'ny fitaizana tsy mahazatra
Baby Condor. Sary: Shutterstock.
Andean Condors dia tsy mamokatra atody iray monja isaky ny roa taona, ary ny fe-potoana fampidirana volo dia 54-58 andro lava. Ambonin'izany, ny ankamaroan'ny Andean Condors dia tsy manangana akany azo antoka sy miaro ny atodin'izy ireo, fa apetrany fotsiny amin'ny sisin'ny hantsana miboridana. Noho ireo antony ireo dia mila mikotrika ny ray sy ny reny ary manome azy ireo fikarakarana sy fikarakarana araka izay azo atao. Matetika ny zazakely Condors dia mamela ny ray aman-dreniny amin'ny taona faharoa amin'ny fiainany, ary maharitra 6-8 taona hahatratra ny olon-dehibe.
6. Manaova ekipa mpanadio tena tsara
Andean Condor mihinana ny sakafony. Sary: Shutterstock.
Satria vorona ny Andean Condor, azonao atao ny maminavina fa ny ankamaroan'ny sakafony dia faty (faty, nofo lo). Noho io antony io, ireo vorona ireo dia manao asa ekolojika tena ilaina, karazana ekipa mpanadio voajanahary. Andean Condors dia tia biby lehibe kokoa, ka noho izany eny amoron'ny morontsiraka dia hofongorany ny tombo-kase, trondro na fatin-trozona fofona efa voasasa eny amoron-dranomasina.
7. Miaina ela kokoa noho ny eritreritrao
Ny Andean Condor am-piambenana. Sary: Shutterstock.
Ny androm-piainana ho an'ny Andean Condor dia 50 taona tena mahafa-po. Na izany aza, ny sasany dia fantatra fa miaina hatramin'ny 75 amin'ny fahababoana. Ity vanim-potoana ity dia mihoatra lavitra noho ny zanak'olo-mpiray tamina Tontolo Vaovao, ny California Condor , izay manana fe-potoana maharitra 60 taona any an'ala.
8. Miatrika famongorana
Andean Condor ao amin'ny zoo. Sary: Shutterstock.
Mihena ny isan'ny faritra Avaratra misy azy, ny Andean Condor dia sahirana tokoa. Napetraka teo amin'ilay Lisitry ny karazan-javamaniry mandrahona iUCN tamin'ny 1973, ary atahorana ho lany tamingana tanteraka ato ho ato. Ny antony voalohany manapotika azy dia ny fihazana olona izay mino diso fa mandrahona ny biby fiompiny ny Condors. Ny antony hafa dia ny fahaverezan'ny toeram-ponenana, sy ny fanapoizinana poizina famonoana bibikely ny rojo sakafo. Na izany aza, tsy ny famoizam-po sy ny haizim-pito ihany no ataon'ireto zavaboary tsara tarehy ireto, noho ny ezaky ny famoahana ny zoo maro, ny Andean Condor dia manomboka miverina indray.
Ny condore Andes dia miaina amin'ny faritra Andes iray manontolo, izay mamela anay hampiasa ny toerana misy ny paikadinay amin'ny firenena mpikambana tsirairay hampivelarana ny fandraisana andraikitra isam-paritra. Izahay dia miasa mba hametrahana tsipika iray hahafantarana ny fandrahonana manan-tantara sy tena izy, ary hamantatra ireo banga amin'ny fampahalalana ilaina amin'ny fitehirizana azy izay hamela ny fanaovana laharam-pahamehana ireo hetsika fikarohana avo lenta.
Any Peroa, ankoatry ny fanomezana fanohanana ara-teknika ny Minisiteran'ny Fambolena sy ny fanondrahana amin'ny hetsika fiarovana azy, izahay koa dia nanadihady ny angona mba hamoronana sarintany mialoha ny fizarana condor any Peru sy Bolivia, mifototra amin'ny fandinihana napetraka tao amin'ny Cornell University Lab of Ornithology's Sehatra eBird ary notaterina tamin'ny resadresaka nifanaovan'ny mpiasan'ny WCS.
Ity sarintany ity dia hahafahantsika mamantatra toeram-ponenana condor izay mifantoka amin'ny vondrom-piarahamonina, hetsika fitrandrahana, fotodrafitrasa, faritra arovana, ary fampiasana tany hafa, ary koa amin'ny fandrahonana sy mpilalao sarimihetsika samihafa izay mila raisina amin'ny famoronana drafi-pirenena hetsika ho an'ny fiarovana ity vorona majestic ity.
zava-misy momba ny condor Andes
Ny anarany amin'ny quechua dia kuntur ary nino ny Incas fa tsy mety maty– dia maneho ny Jananpacha , ny tontolon'ny lanitra sy ny ho avy.
Ny elanelana misy eo amin'ireo teboka an'ny elany miparitaka (~ 3,3 metatra) dia maneho ny elatry ny vorona terestrialy lehibe indrindra.
Ny condore Andes dia ampahany amin'ny ampingam-pirenena efatra, izay maneho soatoavina samihafa: Bolivia (fanenjehana tsy misy fetra), Chile (tanjaka), Kolombia (fahalalahana sy filaminana), ary Ekoatera (fahefana, fahalehibiazana ary valeur).
Monogamous ity vorona ity ary ny renim-pianakaviana dia manentana ny atody. Ny zanany vavy dia mijanona miaraka amin'ny ray aman-dreniny hatramin'ny 2 taona alohan'ny hiatrehany an'izao tontolo izao irery.
Amin'ny vanim-potoana sasany amin'ny taona (Oktobra any Peroa), ny condor Andes dia manidina avy eo an-tampon'ny Andes mankany amin'ny morontsirak'i Pasifika hihinana fatin'ny liona sy ireo placenta nariana.
Iray amin'ireo mpiremby afaka manapaka ny hoditra guanaco mafy amin'ny vavany irery.
Andes condors dia matotra amin'ny faran'ny taona (farafahakeliny 5 taona, miaraka amin'ny tatitra momba ny zazakely voalohany amin'ny 11 taona), ary manana zana-borona iray isaky ny 2-3 taona fotsiny. Izany dia mahatonga azy ireo ho mora tohina amin'ny fandrahonana noho ny tahan'ny fanarenana ambany.
Izy ireo dia anisan'ny fianakaviana Cathartidae, izay avy amin'ny teny grika kathartes midika hoe izay manadio.
Ny condo Andes dia soarers mafana, izay midika fa miakatra miaraka amin'ny onjan-drivotra izy ireo, manampy azy ireo hahita fatin'ahitra avy amin'ny haavo avo ka hidina eo amboniny nefa tsy handany angovo be.
Ny condor Andes dia mampiseho dimorphism ara-pananahana- io dia rehefa samy manana ny endrik'izy ireo ny biby amin'ny karazany iray samy hafa mifototra amin'ny firaisana ara-nofo. Ny condorite Andes lahy dia manana vozon'akanjo fotsy sy vatolampy fotsy, fa ny condor kosa Andes vavy kosa tsy manana.